Amanye amaqhinga okusheshisa i-KDE | Kusuka kuLinux
Amanye amaqhinga okusheshisa i-KDE
Yebo, labo bethu abasebenzisa i-KDE bayazi ukuthi ayiwulungele noma yimuphi umshini. Ngenkathi benze igxathu elikhulu ekunciphiseni kakhulu inkumbulo nokusetshenziswa kwe-CPU, i-KDE kuseyindawo "esinda kakhulu" yedeskithophu. Kodwa-ke, kungashiwo futhi, ngaphandle kokwesaba ukuthi uzokwenza iphutha, ukuthi i-KDE nayo iphelele kakhulu. Ngokuqondile ngalesi sizathu abaningi bethu abakwazi ukuphila ngaphandle kwaso.
Ngenhlanhla, kukhona "amaqhinga" ambalwa okuthi "unciphise phansi" i-KDE yethu futhi iyenze isebenze ngokushesha, okuzophinde kusize ekusetshenzisweni kwamandla okuphansi. 🙂
1 Khubaza i-Semantic Desktop Search (Nepomuk)
2 Khubaza imiphumela yedeskithophu
3 Khubaza ukugqwayiza kwe-Oxygen
4 Khubaza u-Akonadi
Khubaza i-Semantic Desktop Search (Nepomuk)
Izinyathelo: Okuncamelayo kwesistimu> Usesho lweDeskithophu> Susa ukumaka inketho "Nika amandla ukusesha kwe-Nepomuk Semantic Desktop".
Khubaza imiphumela yedeskithophu
Izinyathelo: Okuncamelayo kwesistimu> Imiphumela yedeskithophu> Susa ukumaka inketho "Vumela Imiphumela Yedeskithophu"
Khubaza ukugqwayiza kwe-Oxygen
Izinyathelo: Ngivule itheminali futhi ngabhala izilungiselelo ze-oxygen. Iwindi lizovuleka lapho uzokwazi khona ukumisa yonke imiphumela ye-Oxygen. Ngokufanelekile, iya kuthebhu ye-Izithombe bese ususa ukumaka inketho ethi "vumela ukugqwayiza."
Ngivule ukuphela futhi ngabhala:
kate ~ / .config / akonadi / akonadiserverrc
thola umugqa othi set seterverver = true bese uyishintsha nge- set starterver = false
Ngemuva kwalokho, ngaso sonke isikhathi ngivela esibulalayo, ngabhala:
kate ~ / .config / akonadi / agentsrc
shintsha zonke izimo ze-akonadi nge #akonadi.
Indlela ephelele ye-athikili: Kusuka kuLinux » I-UseLinux yeFayileLet » Amanye amaqhinga okusheshisa i-KDE
UTomas Ortiz kusho
Angikwazanga ukufaka i-mint 10 64bit kde 4.6; Ngilande i-iso kaningana futhi ihlala ilenga ku- "ukufaka". Ngabe ukhona kini ongakhetha ukuyifaka? Sengivele ngiyizamile bukhoma futhi manje njengoba ngifuna ukufaka angikwazi ukukwenza; Ngiyabonga …..
Phendula uTomas Ortiz
Kunjalo. I-KDE ithuthuke kakhulu. Ngicabanga ukuthi kusengathuthukisa ukusebenza kancane kancane, kepha yindawo enhle kakhulu yedeskithophu… okungenani okwamanje. Sizobona ukuthi kwenzekani nge-GNOME 3.
USaito Mordraug kusho
Lezi amathiphu awusizo kakhulu (kungcono ukukhubaza imiphumela ne-Nepomuk).
Ngithola kabusha i-KDE (eneLinux Mint) ngemuva kweminyaka engu-2 ngingayisebenzisi ... iyamangalisa futhi njengoba usho ngokuphelele: ngenkathi ngine-gnome noma i-xfce kufanele ngifake izengezo ezenza impilo yami ijabule kakhulu nge-KDE senginazo ngokwakhona . Nginezicelo eziningi ezibalulekile kimi: I-Kmymoney, i-Okular ne-K3B, iphelele kakhulu kunalokho okufana nakho ku-gnome (ngoba yize ingafakwa ku-gnome -sim times- some dependency have to be completed).
I-KDE inhle, futhi ithatha indawo enhliziyweni yami yeLinux.
Phendula ku-Saito Mordraug
Ngiyabonga mngani, kungisize kakhulu ukwenza iKubuntu 13.10 yami isheshe.
I-RedNotebook, iphephandaba ngekhulu lama-XNUMX